गगन थापालाई देउवाले लगाए बोल्नै प्रतिबन्ध, यसको परिणाम अब के होला ?
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्य गगन थापालाई बोल्नै प्रतिबन्ध लगएका छन् । देउवाले गगनले न्यायालयमा देखिएको विवादका विषयमा कांग्रेसले बोल्नुपर्छ भन्दा उनलाई रोकेका हुन्।
सोमवार, कार्तिक २९, २०७८ ८:२१
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्य गगन थापालाई बोल्नै प्रतिबन्ध लगएका छन् । देउवाले गगनले न्यायालयमा देखिएको विवादका विषयमा कांग्रेसले बोल्नुपर्छ भन्दा उनलाई रोकेका हुन्। ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
’गगनले न्यायालयमा देखिएको विवादका विषयमा पार्टीले बोल्नुपर्छ भनेर आफ्नो भनाइ राख्नुभो। तर, सभापतिजीले उहाँलाई बोल्नबाट रोक्नुभयो’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने।
’सम्मानित अदालतमा भइरहेको समस्या चर्कियो भने व्यवस्थाले मूल्य चुकाउनु पर्छ। तत्काल समाधान नगर्ने हो भने महाधिवेशनसम्म अवस्था विथोलिन्छ। चुप लाग्न मिल्दैन’, बैठकमा थापाले भने, ’यसमा गम्भीर हुनुपर्छ। सभापतिको ध्यान जानुपर्छ। यसमा पार्टीले बोल्नुपर्छ।’
उनले जनसम्पर्क र भातृसंस्थाको महाधिवेशन हुन नसकेकाले प्रतिनिधि आउन पाउने र नपाउने प्रष्ट हुनुपर्ने पनि बताए। ’महाधिवेशनले नीति कार्यक्रम बनाउने भन्ने हो। विधानको यो व्यवस्थाले के गर्ने? निलम्बन गर्ने कि के गर्ने?, बैठकमा थापाले प्रश्न गरे।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक सभापती देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा जारी छ। बैठकमा महाधिवेशनको तयारी, कांग्रेसको नीति र विधान तथा समसामयिक विषयमा छलफल भइरहेको छ।